Ezikhumbuzo Famous bokwakha Russian
ezikhumbuzo Russian bokwakha, ezisukela izigodlo omangalisayo futhi ababhishobhi nge iminyaka eyinkulungwane umlando izakhiwo wesimanje, ezihlaba izivakashi umxhwele okwakhe kanye ukukhanya. Ezingavamile idolobha Russian kungaba ukuziqhayisa ethempelini lasendulo, ocebile castle, indlu fancy noma ibhuloho engavamile. Nokho, kukhona yobuciko ukuthi zimane akunakwenzeka isigqoko!
Cathedral St Basil sika
Izakhiwo zasendulo Russia - Ngokuyinhloko amathempeli zikanokusho. Cathedral St Basil sika uye wakwazi ukuba abe edumile kulo lonke sibonga wonke ukuba esiyingqayizivele yayo futhi engavamile. Isakhiwo ine isimo eqenjini lomculo ezakhiwe stolpoobraznoe amasonto ayisishiyagalolunye (ezimele). Zonke zitholakala egumbini efanayo (ngezansi), ehlangana zemibukiso zangaphakathi nezangaphandle.
Cathedral, kufakwe ohlwini Russian Museum ngobukhulu emlandweni futhi yokwakha, ise "inhliziyo" yenhloko-dolobha - e Red Square. Ibandla ngokubabazekayo Yakhiwa ngemiyalo yezikhulu Ivan le Kubi phakathi nekhulu le-16, namhlanje kunjengoba St Vasiliya Blazhennogo ezaziwayo. isithombe umcebo umphumela abadali umdlalo nge izinto ezimbili: itshe elimhlophe kanye isitini. Ukwehlukahluka kwezimangaliso Decor, okuyinto izici eziningi ezidumile izikhumbuzo Russia, kufezwa ngokusebenzisa izinhlobo eziningana isitini ukucutshungulwa amaphrofayli asetshenziswe inhlanganisela ezahlukene.
Cathedral St Sika-Isaka Sokuba
Ngisho izivakashi Petersburg, bazithola "dolobha wesibili" ikhambo, kufanele nakanjani vakashela Cathedral St-Isaka. Lesi sakhiwo grand injalo manje yakhiwa kuleli iminyaka 1818-1858, njengesisekelo iphrojekthi sathathwa, elaklanywa wezakhiwo Auguste Montferrand. Nokho, njengabanye izikhumbuzo eziningi izakhiwo Russian kwekhulu le-19, isonto lombhishobhi inomlando omude, oqala isonto elincane, eyasungulwa ekuqaleni kwekhulu le-18. Ithempeli ingenye izakhiwo ngobukhulu oluyingungu emhlabeni, ububanzi Dome of 21,8 amamitha, indalo yayo iye iminyaka engaphezu kg 100 egolide.
Izivakashi bakhangwa hhayi kuphela eyinkimbinkimbi Dome imidwebo esibonisa izigcawu zeBhayibheli, wezangaphakathi ocebile lombhishobhi - kwezinhlobo ezibalulekile zemabula, Malachite, Lapis lazuli, zegolide. Emphemeni High - esinye sezizathu esiyinhloko ukuthandwa ethempelini. Ukusebenzisa ungumthombo ongumngcingo ezitebhisini Kuvunguza, ungase uzithole endaweni engamamitha 43 amamitha futhi ujabulele ukubukwa esiyingqayizivele uPetru wehlelwe yini.
Izikhumbuzo Architectural Russia - lokhu kubandakanya amabhuloho yasekuqaleni eyakhelwe hhayi kuphela Emakhulwini eminyaka adlule, kodwa ezinsukwini zethu. Izwe lonke uyazi ukuthi ukhona kwebhuloho Ukudansa e Volgograd. Yena wathola yakhe isidlaliso isakhiwo ngo-2010, lapho ngenxa umthwalo umoya unyakazisa. Naphezu eside amplitude iyehla iyenyuka (elilodwa) ka egandayiwe eziveza agcinwayo ubuqotho. Ibhuloho ukuphepha iye izuzwe ekhethekile ukushaqeka ezidayiswayo.
Yazisa Krasnoyarsk ibhuloho kamasipala, ngokufaka inani lezinhlamvu eSiberia, kungenzeka kungabi kuphela lapho evakashele edolobheni, kodwa futhi ebuka eyiphepha (ruble 10). Ukwakhiwa lakhiwa phakathi nokubusa Khrushchev isikhathi eside ayebhekwa omude kunayo yonke Asian ibhuloho ubude 2,300 amamitha. Abathandwayo ubuchwepheshe esiyingqayizivele, yakhetha abakhi: ukwenqaba belay izisekelo.
Manege Square, okungase angeke sehluleke ingasaphathwa, sibhale izikhumbuzo bokwakha isiRashiya, kubhekwa wobuciko lokuqala abadumile Tsereteli elikhanyayo e Moscow, ise ezindongeni ezibiyele, emngceleni we Historical Museum kanye Alexander Garden. Arena, elakhiwa ngo-1817, kuze kube-yalolucwaningo 30 ekhulwini elidlule leminyaka iye "anezinhlaka" izakhiwo ezisemadolobheni obukhulu. Liberation Square senzeka ngo-1932 maqondana ukwakhiwa umasipala.
Kwathengwa isakhiwo esiyisitezi grand endaweni kwakuqala ngo 90 zokuqala. It yadalwa "Okhotny Ryad", owaba ngowokuqala eMoscow Sekutsenga elise ngomshoshaphansi. Futhi ngaphansi kokuqondisa Tsereteli ngabona ukukhanya wendlale siyakhazimula nemithombo ngamahhashi omkhulu, ukukhanyisa namabhentshi ethokomele. Kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke Manezhnaya Square ibonwa njengoba phambili Alexander Garden.
Hermitage ubizwa kufanele kubhekwe sezakhiwo ezinhle kunazo Petersburg, isibonelo ezimibalabala kokusa baraque aluhlaza, kulesi siqondiso kukhona ezikhumbuzo eziningi eziphawulekayo izakhiwo Russian ngalezo zikhathi. Isigodlo isakhiwo, kusale kuze ngemuva nezinye izakhiwo enyakatho dolobha sibonga ubuhle kanye nosayizi, sidalwe umakhi Rastrelli kuhlelwe njengoba yokuhlala tsars Russian.
Ukwakhiwa, asibekele nezinye izikhumbuzo bokwakha Russian kwekhulu le-18, ohlala endaweni enkulu njengamanje ihlanganisa Hermitage Theatre, Old, New, Small Hermitage. Eqinisweni, ukwakhiwa wawuqala 1764 kuya onyakeni 1852. olungaphambili lwesonto ngalinye akafani nabanye njengoba abadali wakucabangela isimo sezwe. Winter Palace has simise elingunxande, ine kwangaphakathi (gala) ebaleni, projection emincane.
ezikhumbuzo eziningi izakhiwo Russian kwekhulu le-17 akukhona nje ukuthi iyaphila kabusha, kodwa futhi wavuselela cishe kusuka ekuqaleni. Uhlu kuhlanganisa Kolomna Palace, njengoba ayephethe uhlobo ikesi eyinkimbinkimbi sokhuni (isikhala) kohlelo, ukuhwebelana kuhlanganiswe. Abasunguli balo badume abaklami Russian Petrov futhi Mikhailov, ukhangwa umsebenzi amakhosi esivelele kunazo zonke-dolobha ngaleso sikhathi.
Isakhiwo, nge zikanokusho umhlobiso exotic (lesikhumba eyayibhalwe, ophahleni kanye odongeni imidwebo waseBhayibhelini, ukhuni eqoshwe) ababanjwe izivakashi zakwamanye amazwe, ekhulwini staid futhi labhujiswa ngo 1767. Londoloza Isakhiwo uyobuyisela isakhiwo nenhle eMoscow.
Ngenkathi uPetru ezikhumbuzo eziningi ezithakazelisayo bokwakha Russian ezakhiwa. Uhlu lufaka Novodvinsk inqaba, okuyinto eyaba ukuziqhenya amasosha Russian, kugcugcutela abangabazi yokwesaba. Ukubona izimpi eziningi, ukwakhiwa ngokwengxenye balondolozwa.
Esikhathini indawo enyakatho yeRussia kuyinto isakhiwo sokuqala ukuthi sekuyinkinga uhlobo inqaba nenqaba. isitayela Architectural - Dutch, izibonelo izakhiwo ezinjalo zitholakala eYurophu nase Melika. Fortress ine uhlobo design square, kantsi sicuketse loku nenqaba ezine esilinganayo kanye cishe 120 metres.
Omunye izakhiwo ezithakazelisayo kakhulu Voronezh - Annunciation Cathedral, elaklanywa wezakhiwo Shevelev. Ithempeli kungokwalabo umzila Russian-WaseByzantium, umlando wayo ixhunyaniswe unyaka isisekelo - 1586. Lesi sakhiwo wokuqala ezenziwe ngokjuni, ke lavuselelwa kaningana. Ukubhujiswa lombhishobhi kwenzeka ngesikhathi yiMpi Enkulu Yobuzwe.
Njengezinye izikhumbuzo bokwakha isiRashiya, izithombe zazo letinikwe lapha ngenhla, ibandla ibuyiselwe (ngo-1998). Manje lombhishobhi itholakala kwenye indawo, kungokwalabo isitayela kuyiwa, ukushintsha ingaphakathi. Njengoba ngaphambili, ithempeli othakazelisayo for Ubukhulu bayo, ngaphandle bedukile ngisho ngokumelene isizinda namabhilidi omkhulu yesimanje. ukuphakama kwalo has 85 amamitha.
Yiqiniso, lena akuyona yonke izikhumbuzo elikhanyayo Russian yezakhiwo ukuthi bayakufanelekela ngokuvakashela okungenani kanye.
Yiziphi izinhlobo yokudweba
Umdwebo "Sunflowers" - wobuciko edumile by Vincent Van Gogh
Sela - ingabe? Kuyini Interlude?
Abaculi Ukrainian 18, 19, emakhulwini eminyaka 20 yesimanje, imidwebo yabo
Udweba kanjani imaskhi enhle?
Ukunwaya amaposi amakati ngezandla zabo: kulula kangakanani ukwenza kubo
Udweba kanjani ubuso bekati. Imiyalelo kanye nezincomo
Kungani tambour iminyango kudingeka?
Pancake Fluffy - uju kusuka ebuntwaneni
Manicure ngesikhathi sokuthweswa iziqu: yimuphi ongcono?
Kanjani ukuqala ngokuyanga na? Ukupheka indoda kahle